Idilesi nguIda C. Hultin, 1893
Umhla we-10, iPalamente yeeNkolo zehlabathi, 1893 iColumbian Exposition, Chicago.
Le dilesi ku-1893 iPalamente ifundiswa ngolwimi olusetyenziswa nguMbusi uHultin. Intetho iphinda ikhutshwe apha njengoko iphrintiwe kwiPalamente yehlabathi yeeNkolo , uMqulu II, ehleliwe nguMfundisi uJohn Henry Barrows, iDD, Chicago, 1893.
U-Ida C. Hultin (1858-1938) wakhuliswa i- Congregationalist , waza waqala ukukhonza iicawa ezininzi ezizimeleyo zaseMichigan.
Ukususela ngo-1884, wayekhonza iicawa zase- Unitarian e-Iowa, e-Illinois naseMassachusetts, kuquka noMoline, e-Illinois, apho ayekhonza khona ngexesha le-1893 ePalamente. Wayevelele kwiNgqungquthela yeNtshona yeeNyunithi, ngezinye i-vice-president weCentral States Conference of Churcharian Churches. Wayengumlindi-ntliziyo kubhinqa.
UMfundisi Hultin wayeyindlela "yokuziphatha" kwi-Unitarian, esebenzayo kwiMbutho Wenkolo Yamahhala (njengoko kwakunguJenkin Lloyd Jones waseChicago, umququzeleli oyintloko wePalamente ka-1893). Aba bantu babezichazile ngokwabo okanye ngaphandle kobuKristu bendabuko. Ngamanye amaxesha bathetha "inkolo yobuntu" okanye "inkolo engqiqweni." Abaninzi bazicingela ngokwabo isizukulwana esilandelayo se- transcendentalists . Nangona iimbono azifani nokokuqala kwexesha leshumi leminyaka-ntsuku, ukuphuhliswa kweso sihlandlo kwakuqhutyelwa phambili kwingcinga yabasetyhini namadoda afana no-Ida Hultin.
Okungakumbi ukusuka kwi-1893 iPalamente yeeNkolo zehlabathi: Umsebenzi kaThixo kumntu - uLaura Ormiston Chant
Ngaphezu kwe-1893 iColumbian Exposition Congress yabaseTyhini: Inkqubela yee-50 iminyaka-uLucy Stone
Ezihlobene: Abafazi be-Transcendentalist Abafazi be-Unitarian kunye ne-Universalist
Ubumbano obubalulekileyo beengcamango zokuziphatha phakathi kwabo bonke abantu
Isicatshulwa esigcwele: Ubumbano obalulekileyo boMoya phakathi kwaBantu bonke ngu-Ida C. Hultin
Imilinganiselo yokuziphatha iphela, kwaye izama ukuqonda, ezinye kunye nolwalamano kwi-Self Infinite sele lidala injongo yembali yabantu.
Okulungileyo nokungalunganga malunga nenjongo, kungekhona imeko kunye nokuziphatha. Isono nobubi bangela ukuba umphefumlo uphuhlise.
Imibuzo yokuziphatha iya ngaphaya kwemfundiso yecawa kunye neecawa. UThixo uhlala kuyo yonke imihla, kwaye ukuthobela elo lizwi nokufumana inyaniso alibophelwa nayiphi na icawa okanye inkolo.
Iicawa kunye neenkolelo zihoyile ubulungisa kwimbali. AbaPhathiswa bafanisa ubugqwetha kanti abanye, kungekhona imfundiso, bakhululwa ngamakhoboka.
"Umfazi wesahlulo somntu" uye wahlupheka ngenxa yeengcinga kunye namaziko efundiso. Kulo lonke ihlabathi, abafazi baye bafumana inkululeko yonqulo ngokunyamekela ingqondo engaphakathi kwintlalo.
"Iicawa ngokubanzi azixhaphali abalambileyo, zimbathise uhamba, zilungiselele abagulayo, ziphendulele iinjongo zibe yizinto zokuguqulwa kwamatyala, kwaye zihlangane ukuze zihlale zibuhlungu bukhohlakele ngokusemthethweni. ezininzi iiklabhu kunye nemibutho kunye namaziko enkonzo yokuphilisa, kunye neendawo zokungenisa imilinganiselo yokuziphatha. Amadoda nabasetyhini ebandleni kunye nabo bawenza lo msebenzi, ngelixa iidoloji zixakeke kunye kunye nezimfundiso. "
Amadoda nabasetyhini bazo zonke iicawa, amazwe kunye neentlanga, nangaphandle kokuqulunqa iinkolelo, baye bazama ukwenza ezo zinto.
Ukuchaza uThixo akubalulekanga kunokuba uyifumane ubomi bemihla ngemihla. I-Theology idinga umgaqo wokuziphatha ukukhula ngokomoya.
Igama lobuKristu alibalulekanga kunomoya kaKristu. Iintetho zaseJapan ne-Indiya zathetha oko kwenziwa egameni likaKristu, kwaye zibiza ubuKristu obungcono.
Sonke kufuneka sifunde ukuthobeka, singaziqhayisa, sikhule ndawonye ekuqondeni.
"Xa kucelwa ukuba kuchazwe iinkcazo ezicacileyo, umntu uyakunqamla, nangaphambi kwendawo engcambu, kwaye ukhula ngakumbi xa ecinga ngezilumko zonke, onyanisekileyo, onobungqina bonke nabanothando bonke. Umntwana ufunda ukungena ebukumkanini. Ukuchaza igama elihle kakhulu elingaziwayo, elithemba, elithandayo, elithemba ngaphezu kokuthetha okanye ukucinga. "
Umlando we-1906 iSan Francisco Ukuzamazama komhlaba noMlilo
Utshintsho lweMvelo kwiKhemistry
I-Omo Kibish (iTopiya) - Umzekelo omdala owaziwa ngabantu basekuqaleni